Falanqeynta Kulanka Atletico Madrid Vs Levante Ee Horyaalka La Liga
HomeFalanqeynta KulamadaFalanqeynta Kulanka Atletico Madrid Vs Levante ee Horyaalka La Liga
Atletico Madrid ayaa garoonkeeda kula ciyaareyso kooxda Levente kulan muhiim ah oo ka dhacaya Estadio Wanda Metropolitano Atletico Madrid ayaa ku jirtay qaab ciyaareed aad u fiican waqtigaan laakiin waa inay ka feejignaadaan guuldaro si ay u ilaalsadaan hogaanka horyaaalka.
Atletico Madrid:- Saul Niguez, Kieran Trippier, iyo Stefan Savic ayaa ganaax ku jira waqtigaan waana laga saari doonaa kooxda. Thomas Lemar, Moussa Dembele, iyo Hector Herrera ayaa kasoo kabanaya coronavirus-ka mana ciyaari doonaan qeyb ka mid ah kulankaan.
Levante:- Jose Campana, Nikola Vukcevic, iyo Gonzalo Melero ayaa haatan ka soo kabsanaya dhaawacyo waxaana laga saaray kulankaan. Nemanja Radoja sidoo kale wuxuu qabaa walaac taam ahaansho ah waxaana laga yaabaa inuusan qeyb ka qaadan kulanka Atletico Madrid.
Atletico Madrid ayaa rikoor fiican ka heysata Levante waxayna guuleysatay 14 kulan guud ahaan 22 kulan oo ay ciyaareen labada koox. Levante ayaa kaliya afar guul gaartay Atletico Madrid waxayna u baahan doontaa inay guul gaarto kulankaan.
Kulankii hore ee labada koox ayaa dhacay horaantii isbuucaan wuxuuna ku dhamaaday barbaro 1-1 oo adag. Levante ayaa si fiican u ciyaartay maalintaas.